Wholesale Sodium Gluconate fekitari uye vagadziri | Gaoqiang
Sodium Gluconate inonziwo D-Gluconic Acid, Monosodium Munyu ndiyo munyu we sodium we gluconic acid uye inogadzirwa nekuvira kweshuga. Iyo chena machena, crystalline yakasimba / poda iyo yakanyungudika kwazvo mumvura. Iyo haina kupisa, haina chepfu, inogadziriswa uye inovandudzwa.Iyo inopesana neiyo oxidation uye kudzikisira kunyangwe patembiricha dzakakwirira. Iyo huru chivakwa chesodiyamu gluconate isimba rayo rakanakisa rekubiridzira simba, kunyanya mune alkaline uye yakanyanyisa alkaline mhinduro. Iyo inoumba yakatsiga chelates ine calcium, iron, mhangura, aluminium uye nezvimwe zvinorema simbi. Iyo yepamusoro chelating mumiririri pane EDTA, NTA uye phosphonates.
Zvinhu & Magadzirirwo
White crystalline nezvimedu / upfu
1. Indasitiri Yekudya: Sodium gluconate inoshanda seyakagadzika, sequestrant uye yehutu painoshandiswa sechinhu chinowedzera chikafu.
2.Makambani emishonga: Mune zvekurapa, inogona kuchengetedza muyero weacid uye alkali mumuviri wemunhu, uye ichidzorera iko kwakajairika mashandiro etsinga. Inogona kushandiswa mukudzivirira uye kurapwa kwechirwere chepasi sodium.
3. Zvizoro & Zvigadzirwa Zvemunhu Kuchengeta: Sodium gluconate inoshandiswa seanobiridzira kuita zvivakwa zvine ayoni yesimbi iyo inogona kukanganisa kugadzikana uye kutaridzika kwezvigadzirwa zvekuzora Gluconates inowedzerwa kune vanochenesa uye shampoos yekuwedzera iwo lather nekutswanya ioni dzemvura dzakaoma. Gluconates anoshandiswa zvakare mumumuromo uye mazino ekuchengetedza zvigadzirwa senge mushonga wemazino uko unoshandiswa kuchenesa calcium uye inobatsira kudzivirira gingivitis.
4. Kuchenesa Maindasitiri: Sodium gluconate inoshandiswa zvakanyanya mune akawanda masipo edzimba, senge dhishi, kuwacha, nezvimwe.
Pasuru & Kuchengeta:
Pasuru:25kg epurasitiki mabhegi ane PP liner. Imwe pasuru inogona kuwanikwa pakukumbira.
Kuchengetedza:Pasherufu-hupenyu nguva makore maviri kana akachengetwa munzvimbo inotonhorera, yakaoma Bvunzo inofanira kuitwa mushure mekupera.
Pashure: Cellulose Ether HPMC yekupurasita / Concrete / Grout seMvura-Yekuchengetedza Mumiriri
Zvadaro: Polycarboxylate Eteri Monomer HPEG / TPEG
Sodium Gluconate Chelating Mumiriri
Sodium Gluconate Concrete Kusanganiswa
Sodium Gluconate MuKudya
Sodium Gluconate Mune Soap